အမျိုးမျိုးသောတိုက်လေယာဉ် - Rikoooo
F-8 Vought ခရူးဆိတ် FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 21.3 ကို MB
အတွက် FSX/P3D သဟဇာတဗားရှင်း here.This အထုပ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဖြစ်ယခုရရှိနိုင် Alphasim / Virtavia ထံမှဟောင်း payware ခရူးဆိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Add-on ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ပျံသန်းဖို့အလွန်ပျော်စရာ၏။ Repaints / မော်ဒယ်များ: ပြင်သစ်ရေတပ်, USAF-မရဏအိန်ဂျယ် - F8-E, J-F8, F8-ရိန်း, 8U-1EThe F8 ခရူးဆိတ် (မူရင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
IRIS က F-35B Scimitar FA.2 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 30.3 ကို MB
အတွက် FSX or P3D သဟဇာတဗားရှင်း hereIncludes6မော်ဒယ်များနှင့် 11 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ခေတ်သစ်ကို virtual cockpit နဲ့ 2D panel ကပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်မိမိစိတ်ကြိုက်အသံ, ထိရောက်သော burner အကျိုးသက်ရောက်မှု, မျိုးစုံ animations တွေကိုပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Handbook.pdf.The Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှသည့် F-35 Lightning II တစ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ရှုဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
Virtavia က F-22A Raptor FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 11 420
အတွက် FSX/P3D ဗားရှင်းမျိုးစုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မော်ဒယ်များနှင့်အတူ hereSuperb တိုက်လေယာဉ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ယခုအခမဲ့အရည်အသွေးဟောင်း payware ။ ထုံးစံဘိုးအင်းက F-2 Raptor single-s ကိုတစ်ခုဖြစ်သည် / ည် Lockheed Martin ကုမ္ပဏီ (readme.txt ကိုကြည့်ပါ), အသံထုံးစံ gauge နဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို virtual cockpit နဲ့ 22D panel ကိုလည်းအမြောက်များအကျိုးသက်ရောက်မှု feature လည်းပါဝင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း AlphaSim FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 8 510
Size: 18.5 ကို MB
အတွက် FSX/P3D သဟဇာတဗားရှင်း hereThe Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါတစ်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, canard-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပံ, တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါသည်။   အဆိုပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ပြုပြင်, သုံးကုမ္ပဏီများ, EADS, Alenia Aeronautica နှင့် BAE Systems ကုမ္ပဏီ၏တစ်ဦးလုပ်ငန်းစုကဒီဇိုင်းခဲ့သည် , သော Eurofighter GmbH သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Atlas CheetahC FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 29.8 ကို MB
အတွက် FSX ဗားရှင်းကိုဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါ Atlas Cheetah တောင်အာဖရိကလေတပ်တစ်တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Dassault Mirage III ၏အဓိကအဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲ, dual-ထိုင်ခုံ Cheetah D ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသဖြင့်, Single-ထိုင်ခုံ Cheetah, E နှင့် Cheetah C. အဆိုပါ Cheetah ရဲ့တစ်ဦးအငြိမ်းစားပြီ ... ဆက်ဖတ်ရန်
Aermacchi ကို MB-339A PAN V.2011 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
အတွက် FSX & P3D hereThis မော်ဒယ်ဗားရှင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါတစ်ခုတိုးတက်လာသောအမြင်အာရုံမော်ဒယ်နှင့်ကို virtual ယာဉ်နှင့်အတူအချို့သောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြန့်ချိမူရင်းကို MB-339A PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) ၏ပြီးပြည့်စုံသော rework ဖြစ်ပါတယ်။ စံပြဒီဗားရှင်းအသစ်ကို Frecce Tric "၏စံဥပမာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပါရှိသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Massimo Taccoli, Paolo Zamparo, အာရုန် R. လိမ်
IRIS Harrier GR9 GR7 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 24.46 ကို MB
အဆိုပါ Hawker-Siddeley Harrier လေယာဉ်ဗြိတိသျှ 1960s ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်ပေါ်ထွန်းသောမြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအများအပြားကအသုံးပြုသောကြောင့် 800 ကော်ပီအကြောင်း built နှင့်ဝေဟင်တိုက်ခိုက်ရေးနိုင်စွမ်းရေတပ်ဗားရှင်းအဖြစ်အဆင့်မြင့် version ကို AV စနစ်-8B Harrier II ကိုတစ်ဦးအမေရိကန်ဗြိတိန်နိုင်ငံ cooperation.The လိုက်လာခဲ့ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Aero Vodochody L159A FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 28.05 ကို MB
အတွက် FSX ဗားရှင်းဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ Aero L ကို 159 ALCA (Advance အလင်းတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်) ကခကျြခကျြ-built Multi-အခန်းကဏ္ဍတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များသည်။ ဒါဟာ 3LODs နှင့်အတူခကျြ Air ကို Force.Features Gmax မော်ဒယ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု၌ရှိ၏ ကာတွန်းဂီယာ, ဘီး, Struts, ခတ်, ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်များ, မြတ်သော, ချုံ့; ကာတွန်းနှင့်နှိပ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Vit Storch
မစ်ဆူဘီရှီက F-1 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 52.1 ကို MB
အတွက် FSX သဟဇာတမူကွဲ hereMitsubishi က F-1 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အဆုံးကတည်းကဂျပန်အတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ပထမဦးဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များခဲ့ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါအဆင့်မြင့်သင်တန်းဆရာမစ်ဆူဘီရှီသည် T-2 အပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီငှက်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်, ပင်လယ်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များအတွက်ဒီဇိုင်းအဖြစ်, Surf ဖို့ယေဘုယျ Air ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Hiroaki kubota အားဖြင့် Daisuke Yamamoto Peinted အားဖြင့်မော်ဒယ်ဒီဇိုင်း (KBT) Effect xml gauge Toshikazu Shimizu ဖွငျ့ဖြစ်ပါတယ်။ OK ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်ပြေအောင် FSX ဒန်နီ Garnier အားဖြင့်
မစ်ဆူဘီရှီက F-2A FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 11 268
Size: 54.7 ကို MB
F-2 ဂျပန်တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ သမုဒ်ဒရာအပြာ livery "ဤလောက၏အလှဆုံးပြောက်ကျား" ဟုခေါ်သည်။ တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ၏ပရိတ်သတ်တွေများအတွက်: ကအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းစွာတစ်ဦးကို virtual cockpit ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် functional တူရိယာနှင့်အတူပြုသောအမှု, အချို့ bea ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Grumman F-14B Tomcat FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 26 323
14 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ Grumman F-4B Tomcat ။ ဒါဟာအဆင်းလှ၏! အရာအားလုံးကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်။ ထုံးစံအသံနှိပ်လို့ရတဲ့ကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းနှင့်ပြည့်စုံ 2D panel ကပါဝင်သည်။ variable ကိုဂျီသြမေတြီ onboard အ burners တွေက effects.The Grumman F-14 Tomcat တိုက်လေယာဉ်စေဖို့ကိုစာနယ်ဇင်း L ကို။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဂျက်ဖ် Dobbing (suite ကို voir fichier readme)
F-14D Tomcat + တဟီတီရှုခင်း + လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွင် Glenn သင်္ဘော USS FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 40 093
Size: 43.3 ကို MB
ဗီဒီယိုများနိူးများအတွက်တစ်ဦးကထိပ်တန်းလေယာဉ်! F-14d Tomcat သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ burner နဲ့မြို့ရိုးကိုအပြီးနှင့်အတူတက်လာပါတယ်။ ပြင်ပအမြင်ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်သံကိုအတားအဆီးဖြတ်သန်းလာသောအခါထိုပေါက်ကွဲသံကြီးစောငျ့ရှောကျ! လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုပယ်ကေဘယ်ကြိုးတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ပျံကဒီ syste နှင့်အတူ 10 မီတာအတွင်းရပ်လိုက် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ အိုင်ဗင် Kostic, စတိဗ် Hinson, ယောဟန် J ကို Schumacher
Soko က G-2 Galeb FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Soko က G-2 Galeb တစ်ယူဂိုဆလပ်စစ်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ add-on တစ်ခုလုံးဝကို download လုပ်ပါရန်။ ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဦးကအိပ်မက်, အသံကြီးမြတ်များမှာ! ဒါကလေယာဉ်အားလုံး position နဲ့ဆက်ဆံလက်ခံခဲ့သည်။ မေတ္တာရပ်ခံအရင်းအမြစ်များအပေါ် အခြေခံ. လေယာဉ်မှူး၏အသက်တော်ကိုနားထောင်: ဤခရီးစဉ်တန်ဖိုးရှိကြောင်းတစ်သက်ရောက်မှုပါပဲ။ အလွန် pleasa တစ်ဦးကအိပ်မက်စက် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ လောနိတျမွို့ Midic, Goran Savic
ဒေါက်ဂလပ် A4 Skyhawk FS2004 ဒေါင်းလုပ်
အဆိုပါရိန်း A-4 Skyhawk တိုက်ခိုက်လေယာဉ်အင်ဂျင်အလင်းနှင့်တစ်ဦးတစ်ဦး-4 တပ်စု၏ simple.The မစ်ရှင်တပ်ဆင်ထားကြသည်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်မှတ်, ရဟတ်ယာဉ်များခေါ်ထုတ်ရန်နှင့်အစောပိုင်း 50s အတွက်အခြားနည်းဗျူဟာ operations.Developed လုပ်ဆောင်သွားရန်, အဖြေဖို့ဖြစ်ပါတယ် -4 Skyhawk မူလက annucl အဖြစ် A-4D codified ခဲ့ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Jean-Pierre Langer
Phantom FGR2FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 5.5 ကို MB
တိုက်လေယာဉ် Phantom FGR2 ။ ပျံသန်းဖို့သာယာသော A ကောင်းဆုံးလေယာဉ်။ အ Tailhook သုံးစွဲဖို့ဘရိတ်အုပ်ကိုသုံးပါ။ တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောသံကိုအပါအဝင်နှစ်ဦး repaints နှင့်အတူဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအား: add-on မေးခွန်းထုတ်စရာ quality.The က F-4 Phantom II ၏တစ်ဦးအမေရိကန်စစ်ဘက်လေယာဉ်တစ်စင်းနှင့်နှစ်ဆယ် centu ၏အရေးအပါဆုံးလေယာဉ်ပျံတဦးက ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Kazunori Ito က